Dhaawacyadii dagaalkii Buuhoodle oo dhammaantood la soo gaarsiiyey Galkacyo & dhakhaatiirta oo si wadajir ah ugu gurmaday. – Radio Daljir
Dhaawacyadii dagaalkii Buuhoodle oo dhammaantood la soo gaarsiiyey Galkacyo & dhakhaatiirta oo si wadajir ah ugu gurmaday.
Janaayo 16, 2012 12:00 b 0
Galkacyo, Jan 16 ? Waxaa isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo maanta la soo gaarsiiyey 7 qof oo dhaawaca ah kuwaasi oo ku waxyeelloobay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Buuhoodle iyo hal qof oo mayd kaasi oo ku soo geeriyooday jidka intii dhaawacu ay soo socdeen.
Dadka dhaawaca ah oo la soo gaarsiiyey isbitaalka magaalada Galkacyo ayaa dhammaantood ah dad shacab ah, waxaana ku jira haween iyo dad kaloo biri-magaydo ah, kuwaasi oo saddex ka mid ahi ay qabaan dhaawacyo culus halka shanta kalena la tilmaamayo in ay qabaan dhaawacyo fudud sida Radio Daljir ay u xaqiijiyeen maamulka isbitaalku.
Dadka ku soo dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay Buuhoodle oo xalay laga soo qaaday magaaladaasi ayaa waxaa ka hortagay mas?uuliyiinta maamulka gobolka Mudug, nabaddoonno, aqoonyahanno, siyaasiyiin waaweyn gobolka Mudug ka soo jeedda iyo dhakhaatiirta caafimaadka kuwaasi oo u soo galbiyey isbitaalka guud ee haatan lagula tacaalayo xaaladdooda caafimaad.
Dhinaca kale waxaa illaa xalay iyo saaka heegan buuxa ku jiray dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaad ee gobolka kuwaasi oo sugayey imaatinka dhaawacyadaasi, waxaana dhakhaatiirta caafimaadka ee gobolku ay maanta gabi ahaanba joojiyeen shaqooyinkoodii gaarka ah iyo goobihii caafimaad ee kale ee ay ka hawlgali jireen si ay ugu gacan-bannaanaadaan daweynta iyo daryeellidda dhaawacyadaasi.
Dadweynaha magaalada Galkacyo ayaa badankoodu ku soo xoomay isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo si ay qayb uga noqdaan gargaaridda caafimaad, iyadoo qaar badan oo ka mid ah dadweynuhu ay ku tabarucayeen dhiiggooda iyo dhaqaalahooda inta.
Madaxda gobolka, siyaasiyiin in badan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka Mudug ayaa markii dhaawacyadaasi la dejiyey kaddib shir saxaafadeed ku qabtay hoolka shirarka ee isbitaalka, halkaasi oo ay uga hadleen dareenkooda ku aaddan dhacdadaasi weerar ee dadka shacabka ah lagu laayey.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Maxamed Yuusuf Jaamac oo hoggaaminayey mas?uuliyiintii dhaqan iyo madaxda dawladeed ee dhaawacaasi ka hortagay ayaa ayaan-darro iyo isir-soocid ku tilmaamay weerarkii shalay maamulka Soomaaliland ay ku qaadeen shacabka Buuhoodle, waxaana uu intaasi ku daray in ay tahay gar-darro aan geedna loogu soo gaban oo qabweyni iyo qallooc siyaasadeed ku salaysan.
Dhinaca kale Maxamed Cali Yuusuf ?Gaagaab? oo ah m/weyne ku-xigeenkii hore Puntland oo ka mid ahaa mas?uuliyiintii shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay tallaabadaasi dagaal ee maamulka Soomaaliland in ay tahay daan-daansi dad laysnimo iyo duulaan qaawan oo lagu diidan yahay jiritaan ummadeed, waxaana uu intaasi ku daray marna in aan loo dulqaadan karin arrintaasi, isagoo soo hadal qaaday, dhiig, dhaqan, dhul iyo dhalasho.
Isla shirkaasi maanta waxaa ka hadlay issimo, odayaal dhaqameed iyo indheergarad ka tirsan qaybaha bulshada kuwaasi oo dhammaantood si caro ku dheehantahay ku muujiyey dareenkooda ku aaddan dagaalka Buuhoodle ka dhacay iyo dadka shacabka ah ee lagu laayey intaba.
Sikastaba ha ahaatee, dagaalkii shalay ka dhacay Buuhoodle iyo keenista dhaawaca ee maanta ayaa abuurtay jawi kacsanaan ah oo durba ka muuqaday dadweynaha gobolka Mudug, iyadoo dhinaca kale ay jiraan meelo badan oo ka mid ah deegaannada Puntland oo sidaan oo kale looga carooday weerarka maamulka Soomaaliland shalay ay ku qaadeen magaalo madaxda gobolka Cay n ee Buuhoodle.
Qaar ka mid ah dhaawacyadii dagaalkii Buuhoodle oo la soo gaarsiiyey Galkacyo iyo dhaqaatiirtii gobolka iskugu tagay isbitaalka guud
Galkacyo, Jan 16 ? Qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee shalay ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay magaalada Buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn ayaa goordhaweyd la soo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo.
Tirada dhaawac ee illaa iyo haatan soo gaaray isbitaalka ayaa dhan 3 ruux oo xaaladoodu aad u liidato kuwaasi oo qayb ka ah tiro badan oo dhaawacyo ah oo aan wali soo gaarin isbitaalka, waxaana meel durugsan uga hortagay gaadiidka dhaawaca ee isbitaalka Galkacyo kuwaasi oo soo dedejiyey saddexdii qof ee ugu cuslaa.
Goordhaw ayaa la filayaa isla isbitaalka Galkacyo in ay soo gaaraan tiro kale oo dhaawacyo ah oo haatan jidka ku soo jira, kuwaasi oo soo saaran baabuur xamuul ah sida noo xaqiijiyeen mas?uuliyiinta caafimaadka ee dhaawacaasi ka hortagay.
Dhammaan dhakhaatiirtii waaweynd ee gobolka iyo inta badan shaqaalihii caafimaadka ee isla isla isbitaallada kala duwan ka shaqaynayey ayaa maanta ka wada hawlgalaya isbitaalka guud ee magaalada Galkacyo si ay gacan uga gaystaan adeegyada caafimaad ee dhaawacyadaasi loo fidinayo.
Xaaladda Buuhoodle oo saaka deggan iyo dhaawacyadii shalay oo Galkacyo loo soo wado
Buhodle, Jan 16 ? Waxaa saaka xasiloon xaaladda magaalada Boohuudle ee xarunta gobolka Cayn kaddib markii shalay uu halkaasi ka dhacday dagaal xooggan oo u dhaxeeyey ciidamada maamulka Soomaaliland iyo dadka shacabka ah ee deegaankaasi ku dhaqan.
Ka sokaw degganaanshaha laga dareemayo Buuhoodle waxaa dhinaca kale socda abaabullo ciidan oo labadii dhinac ee shalay dagaallamay ay iskugu hub iyo ciidan aruursanayaan, iyadoo la muujinayo walwal ku aaddan dagaal mar kale curta sida ay soo sheegayaan wariyaashayada gobolkaasi ku sugan.
Dhinaca kale dadkii shacabka ahaa ee shalay ku dhaawacay dagaalkii ka dhacay Buuhoodle ayaa loo soo qaaday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug si xaaladdooda caafimaad loola tacaalo.
Isbitaalka weyn ee magaalada Galkacyo ayaa haatan waxaa ka socda diyaar garaw ballaaran oo ku aaddan sidii loo daryeeli lahaa dhaawacyadaasi, iyadoo dhakhaatiirta waaweyn ee magaalada ka hawlgalaana dhammaantood ay iskugu tageen isbitaalka weyn, waxaana ay maanta joojiyeen dhakhaatiirtu shaqooyinkii ay ka qaban jireen xarumaha caafimaad ee sida gaarka ah ay u lahaayeen.
Ma ahan markii ugu horraysay oo sidaan oo kale dhaawacyada Buuhoodle loo keeno Galkacyo, waxaana ay ahayd sannad ka hor markii dhaawacyadii Kalshaale la soo gaarsiiyey Galkacyo, iyadoo loo fuliyey adeegyo caafimaad oo lacag la?aan iyo daryeello kale oo la xiriiray xagga noloshooda, taasoo ay ka wada qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka.
Al-Shabaab oo sheegay in Kenya ay ku fashilantay hawlgallada ay ka wado Soomaliya
Ciidamada Soomaliland oo laga saaray magaalada Buuhoodle oo ay gelinkii hore ee maanta soo galeen.